တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့ပါဝင်သည်။ စစ်အစိုးရအတွက် ရုရှားနိုင်ငံမှ လက်နက်များဝယ်ယူရန် လက်နက်ပွဲစားအဖြစ် လုပ်ကိုင်သည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ အာရှစိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ထူထောင်ပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာသည်။ ဘဏ်တည်ထောင်ပြီး မကြာမီ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ထို ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းမှ ပျယ်ဖျက်ပေးခဲ့သည်။
ဦးတေဇ၏ အဲပုဂံ လေကြောင်းသည် မြန်မာအမျိုးသားလိဂ် ပြိုင်ပွဲဝင် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း၏ အဓိက ထောက်ပံ့ပေးနေသော စပွန်ဆာကုမ္ပဏီလည်း ဖြစ်သည်။ သူ၏သားဖြစ်သူ ပြည့်ဖြိုးတေဇမှာ ဘောလုံးအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဦးတေဇသည် သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်များတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
↑ "Money Men" (September 2008). The Irrawaddy. Archived6January 2010 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တေဇ၊_ဦး&oldid=732733" မှ ရယူရန်
၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၂:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၂:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။